Dawladda Kheyre oo Qaldantay !
Muqdisho,4th August 2018
Waxaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda weeraray maanta oo Sabti ahayd ciidan ka tirsan Booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo doonayay in ay gacanta kusoo dhigaan, oo soo xidhaan Wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya kaas oo xilligaas kusuganaa xafiiskiisa ee Xaruunta Wasaaradda.
Iska hor imaad aan sidaas u-sii weyneyn ayaa dhex maray ilaalada Wasaaradda iyo Ciidankii isku dayay inay gacanta ku dhigaan Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda, oo isagu mas'uul ka ah arrimaha Xisaabaadka Wasaaradda. Sida la soo wariyay, Idaacadda BBC-da oo wareysatay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa u sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ka damiintay Wasiirka ciidankii booliska ee rabay inay jeelka u taxaabaan Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda.
Ciidanka Booliska ayaa ku andacooday in ay wateen warqad qoraal ah oo ay Maxkamadda soo saxiixday taas oo Wasiirka Ku-Xigeenka WAD lagu eedeynayo musuq-maasuq baahsan.Waa Su'aale warqad ay maxkamad soo qortay sidee buu Ra’iisul Wasaare ku hor-istaagi karaa ? Waa maxayse awoodda uu ku celin karo qoraalka maxkamadda ?
Hadii ay dhab tahay in Ra'iisul Wasaare Kheyre uu hor istaagay amarka maxakamadda, waxaa halkaa ka cad in aysin jirin awood kala baxa hay'adaha dastuuriga ee dawlada oo kala ah :
1- Hay'adda Fulinta oo ah Xukuumadda,
2- Hay'adda sharci-dejinta oo ah baarlamaanka,
3- & Hay'adda dhowrista sharciga oo ah garsoorka.
Taas oo muhiim u ah habsami-u-socodka nidaamka dawliga ee lagu maamulo oo dalalka aduunka ku dhaqmaan.